Ucelelwa imithandazo umculi olimale engozini yemoto
OWODUMO lwengoma ethi Umlilo ulimale kabi engoziniyemoto Isithombe:SITHUNYELWE
ISIHLABANI somculo we-Afro pop, uWinnie Khumalo, sicelela indodakazi yaso, uRethabile umthandazo emuva kokulimala kabi engozini yemoto. URethabile yile ntokazi ecula engomeni kaDJ Zinhle ethi Umlilo. Nakuba uWinnie engandanga ngamazwi mayelana nokuthi le ngozi yenzeke kuphi futhi nini kodwa uchaze isimo sendodakazi yakhe njengesingagwinyisi amathe.
UWinnie udalule lezi zindaba ekhasini lakhe likaTwitter kanje: "Sanibona bangani. Ngithanda ukunazisa ukuthi uRethabile ulimale kabi engozini yemoto. Singayithakasela kakhulu imithandazo yenu." UWinnie, odume ngengoma ethi Heyi Laaitie ngeminyaka yo-1980 nethi Let Me Live My Life, akakhulumi njengonina kuphela kodwa ubuye abe wumphathi kaRethabile njengoba eseqopha ngaphansi kwenkampani yakhe iWinnkay Records.
Nasekhasini lika-Instagram kaRethabile ziphinde zaqinisekiswa lezi zindaba njengoba kubuye kwabhalwa kanje: "Sanibona balandeli bakaRethabile. URethabile ube sengozini yemoto futhi akaphethekile kahle kodwa uzoba ngcono ngokuhamba kwesikhathi, ngiyabonga. Ngiyaninxusa kakhulu ukuba nimbeke emithandazweni."
UWINNIE Khumalo ucelela indodakazi yakhe, uRethabile, isiguqo kubantu baseNingizimu Afrika Isithombe:FACEBOOK
Phakathi kwezinkumbi zabantu abafisele uRethabile ukwelulama ngokushesha kubalwa nomlingisi woZalo, uCebelenkosi "Mr Vibe" Mthembu odlala indawo kaDetective Nyawo noHlosiwe Mthalane odume ngelikaDJ Hlo, abasanda kwenza naye ingoma ethi Ebusuku.
Yize uWinnie ekhathazekile ngesimo sendodakazi yakhe kodwa uRethabile ucashunwe kweminye imithombo yezindaba ethi sekungozi makhaza yize kunezibazi ebusweni azogcina esephila nazo impilo yakhe yonke nazo. NgoMsombuluko ebusuku wabonakala enandisa kwiJoox ebhandishile. URethabile uvelelwa yile ngozi nje ubesanda kukhipha umucwi osihloko sithi Hlonipha.